» बरामद गरिएको गाँजा किन नष्ट गर्दैन मकवानपुर प्रहरी ?
बरामद गरिएको गाँजा किन नष्ट गर्दैन मकवानपुर प्रहरी ?
२०७६ बैशाख २,सोमबार ११:११
मकवानपुर २ वैशाख । जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरले विभिन्न समयमा बरामद गरेको गाँजा नष्ट गरेको छैन । गाँजा बरामद गरेपछि पत्रकार सम्मेलननै गरेर सार्वजनिक गर्ने प्रहरीले नष्ट गरेको वा गर्नेबारे भने जानकारी दिने गरेको छैन । प्रहरी स्रोतका अनुसार जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरले गत ६ महिनादेखि गाँजा नष्ट गरेको छैन ।
प्रहरीसंग कति परिणाममा गाँजा बरामद गरिएको छ भन्ने चुस्त दुरुस्त लेखाजोखा समेत छैन । स्रोतका अनुसार थुपारिएको गाँजाका कारण प्रहरी अधिकारीहरुलाई कार्यालयमा बसेर काम गर्नै सास्ती भइरहेको छ ।
जिल्ला प्रंहरी कार्यालयका अनुसार, २ बर्षको अवधिमा जम्मा हुने भन्दा बढी मात्रामा गाँजा दुई महिनाभित्र जम्मा भएको छ । प्रहरी स्रोतले तु खबरलाई दिएको जानकारी अनुसार गाँजा करिब १ हजार किलोग्राम थुपारेर राखिएको छ ।
तु खबरले यसबारे मकवानपुरका प्रहरी प्रमुख एसपी मुकेश कुमार सिंहलाई जिज्ञासा राख्दा उनले अब छिट्टै गाँजा कति छ त्यसको परिणाम पत्ता लगाएर नष्ट गर्ने बताए । उनले आफु मकवानपुर आएदेखि गाँजा नष्ट नगरेको स्वीकार गरे ।
त्यस्तै प्रहरी प्रवक्ता सागर राणाले केही दिनअधि तु खबरसंग कुराकानी गर्दै आज सोमबार गाँजा नष्ट गर्ने बताएका थिए । तर आज पनि गाँजा नष्ट नगर्ने प्रहरी स्रोतको जानकारी छ । प्रवक्ता राणाले पनि आज विविध समस्याका कारण गाँजा नष्ट नगरिने बताए ।